Inoda kubhadharwa kubva kuharare yenyika kusvika kumatanho asina kusimuka kuIstanbul Airport - RayHaber | raillynews
mushaTURKEYDunhu reMarmara34 IstanbulKumbira kubhadharwa kune asina kusimuka nhanho kuIstanbul Airport
07 / 01 / 2020 34 Istanbul, GENERAL, Airports, HIGHWAY, musoro wenyaya, Dunhu reMarmara, TURKEY
vanoti yakabhadharwa kubva kuimba yekumusoro kusvika kumatanho asina kubikwa panhandare yendege Istanbul
Imwe chete yematanho mana eIstanbul Airport, iri kushanda, ichave yakabhadharwa nekuda kwevimbiso dzevatakuri mumatanho asina kusimuka.
SözcüSekureva kwaBasak Kaya, CHP Kocaeli Mutevedzeri waHaydar Akar, kambani haisi kuvhura mamwe matanho emubhadharo wechibvumirano chevatakuri, akadaro. Akar akataura kuti Istanbul Airport yakapihwa nzira yekuvaka-inoshanda-uye ndokuyeuchidza kuti nhandare yendege ine mabhiriyoni mazana maviri nemakumi maviri neshanu emamiriyoni gumi nemashanu Euro pamwe neVAT yemakore makumi maviri neshanu yekushanda. Akar akati:
Devlet Hurumende yakapa 61 muzana chenjedzo yendege itsva. Iripo basa, VAT, kuregererwa patsika kwakapiwawo. Iyo yakasimbiswa yekupfuura faiti pese paBOT nendege ndeye 15 maEuro pamitsetse yenyika uye 20 maEuro pano. 3-2 Euro kuairport airports uye 5 Euro pano. Nhandare yendege ine zvikamu zvina. Matanho 4 ne3 achaitwa zvichienderana nemamiriro ezvinhu e4 ne1. Saka hazvisi pachena kana zvatoitwa. Kana pakava nemhirizhonga, kambani inovaka nhanho 2 ne3, uye kana zvisingaiti, haigoni. ”
Anoshanda anowana mari yake
Haydar Akar akasimbisa kuti huwandu hweakavimbisa hwekufamba huchavakwa uchifunga kuti nhanho dze3 ne4 dzinozovakwa .. "Akaundi emunhu akatakurwa akaitirwa aya matanho." Chikamu chekutanga chichava nekwaniso yemamirioni makumi manomwe vanofamba. Mushure mechinhanho chechipiri, vanokwenenzvera vanogona kuve mamirioni makumi mapfumbamwe. Kana mamirioni makumi mapfumbamwe akaramba, chikamu chechitatu chichavakwa uye mukana wemamiriyoni makumi maviri uchauya. Kana Chikamu chechitatu chikanamira, Chikamu chechina chichavakwa. Kunyangwe kana isina kugadzirwa, makambani anoshanda anowana mari yavo. Nekuda kwezvibvumirano pahuwandu hwemota dzaunovimbisa uye kuchinjana kwaunopa, hurumende haigone kukwidza mari kune vanoishandisa. Iwe unovaka mugero nenzira imwe cheteyo. "Tinosangana nemufananidzo mumwechetewo pamhepo nepamhepo."
Mutevedzeri Mukuru weGurukota rezvekutakura, Zvifambiso network, nenguva, makore gumi apfuura yapılan
By njanji pakati Germany uye Turkey TR Box Transport Inotanga
Chiratidzo cheTender: Susta Safes Achatengwa (TUDEMSAS)
3 Ichitevera Claim of Immigration. Airport View from Air
3. Zvipomera zvekufa kwevashandi zvakaendeswa kuParamende
Kuenda kuIstanbul Airport Mapatimendi Anodzokororazve
Nyaya yeDHMİ pamusoro pezvakataurwa kuti ndege hadzigone kuIstanbul Airport
Mitsva Yokutengesa Zvikamu zveIstanbul Airport
Sapanca Fast Train Expropriation Zvinotambirwa Kubhadharwa
Chikwereti Chinobhadharwa Nevashandi Kuongorora Zvinhu Zvinokuvadza